ချောင်တာ ကျပ်တာက ပြဿနာလား? | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန် ချောင်တာ ကျပ်တာက ပြဿနာလား?
ယောကျာ်းနဲ့မိန်းမ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမျိုးမှာ လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝစေဖို့ဆိုရင် ကနဦးနှိုးဆွမှု ၊ နှစ်ဦးစလုံး အတိုင်အဖောက်ညီညီ လှုပ်ရှားမှု နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်လို့ခေါ်တဲ့ အစရှိတဲ့အချက်တွေပေါ် မူတည်နေလေ့ ရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆန္ဒပြည့်ဝမှုနဲ့ ပက်သက်ရင် အပြောများတဲ့ နောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မိန်းမကိုယ် အကျဉ်း အကျယ် က လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝမှုပေါ်မှာ မူတည်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီအချက်က အပြည့်အဝမှန်ရဲ့လား? ဒါမှမဟုတ် ယုံတမ်းသက်သက်ပဲလား ဆိုတာ သိလိုရာမေးက ဆွေးနွေးသွားချင်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ မိန်းမကိုယ်က အတူနေတဲ့ အကြိမ်ရေ များလာတာနဲ့အမျှ ကျယ်သွားတယ် ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြောချင်ပါတယ်။ မိန်းမကိုယ်ဆိုတာ ပါးလွှာပြီး ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်တဲ့ တစ်သျှူးတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားတွေ မတူကြသလိုပဲ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မိန်းမကိုယ်ပုံစံကလဲ မတူညီပါဘူး။ အမျိုးသမီးတစ်ဉီးချင်းစီအလိုက် မိန်းမကိုယ် အရွယ်အစား၊ ပုံစံ တွေနဲ့ အရောင်စတာတွေ မတူညီတဲ့အတွက် အကျဉ်းအကျယ်ကလဲ ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ကလေးမီးဖွားချိန် နဲ့ လိင်စိတ်ကြွနေတဲ့ချိန်ကလွဲရင် တခြားအချိန်တွေမှာ မိန်းမကိုယ်ကို ဝန်းရံထားတဲ့ တစ်သျှူးတွေက တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ စိတ်ကြွလာတဲ့ အချိန်မှာ ဒီတစ်သျှူးတွေရဲ့ သဘာဝက လျော့ရဲပြီး မိန်းမကိုယ်ကို သဘာဝအတိုင်း ပျော့ပြောင်းလာစေပါတယ်။ ဒီလို ပျော့ပျောင်းမှုက လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေဖို့ အထောက်အကူပေးပါတယ်။ ဆန္ဒပြည့်ဝသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ မိန်းမကိုယ်က မူလ သဘာဝအတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အမျိုးသမီးတွေက ရာသီလာချိန် နီးကပ်လာတဲ့အခါမှာ မဟော်မုန်းမြင့်တက်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလို အီစတိုဂျင်ဟော်မုန်းမြင့်တက်ခြင်းက မိန်းမကိုယ်ကို သဘာဝအလျှောက် ချောဆီထွက်နှုန်းများစေတဲ့အတွက် ဒီအချိန်မှာ တခြားအချိန်တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် လျော့ရဲနေတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ မိန်းမကိုယ်ရဲ့ သဘာဝက အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ကျဉ်းနိုင် ကျယ်နိုင်တဲ့အတွက် အတူနေတဲ့အကြိမ်ရေ များလို့ တစ်သက်လုံး ကျယ်သွားတယ်ဆိုပြီး တထစ်ချပြောလို့တော့ မရနိုင်ပါဘူး။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သက်လို့ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းအများစုက First Time ချစ်ရည်လူးတဲ့အခါမှာ ခံစားရတဲ့ ဖီးလ်နဲ့ အတူနေတာကြာပြီး အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်လို့ ခံစားရတဲ့ ဖီးလ် ကွာတယ်ဆိုပြီး ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှန်တရားက လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ဖီးလ်ကောင်းဖို့ဆိုတာက မိန်းမကိုယ် အကျဉ်း အကျယ်ထက်စာရင် မိန်းမကိုယ်ကို ခြံရံထားတဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းကြွက်သားတွေရဲ့ ကြုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်အားနဲ့ပဲ ပိုပြီး သက်ဆိုင်ပါတယ်။ သဘောကတော့ နှစ်ဦးသား အတူနေတဲ့အခါမှာ အမျိုးသမီးရဲ့ မိန်းမကိုယ်ကြွက်သားက ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်အားကောင်းရင် ယောကျာ်းရဲ့ လိင်တံကို ညှစ်ထားသလို ဖြစ်ပြီး လိင်ခံစားမှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဒီတော့ သိထားရမှာက ဖီးလ်လို့ ကောင်းတာ မကောင်းတာက မိန်းမကိုယ် အကျဉ်းအကျယ်နဲ့ တိုက်ရိုက် အချိုးမကျဘူးဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။
ဒီတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မိန်းမကိုယ်လမ်းကြောင်း ကျဉ်းတာ ကျယ်တာက အမျိုးသားတွေအတွက် လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝမှုအပေါ် လုံးဝ သက်ရောက်မှု ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ မမှန်ပါဘူး။